काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सात महीनाको अवधिमा ६९ अर्ब ३२ करोड ५१ लाख ५६ हजार ४०४ रुपैयाँ लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउने लक्ष्यका साथ केही उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग..
यस्ता छन् सरकारका पछिल्ला २३ निर्णय, सरुवा बढुवादेखि बर्खास्तसम्म
फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न २३ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिष्द बैठकका निर्णय बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता..
कसले लिने ८० हजार किलोमिटर सडकको जिम्मा ?
काठमाडौं । देशभरका झण्डै ८० हजार किलो मिटर सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारको काम कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । देश नयाँ संरचनामा गएपछि कुनकुन र कस्ता सडक कसले जिम्मेवारी..
बेझाड । बेरोजगारी समस्याले तड्पिएका युवालाई नदी, खोलामा पक्की पुल निर्माणकार्य धमाधम हुन थालेपछि रोजगारीको ठूलो अवसर मिलेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र विदेश गएर फर्केका युवालाई गाउँका विभिन्न..
पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतबाट नाफाघाटाको कुरा आइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतको कारण ढिलासुस्ती भइरहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई बुधवार सम्बोधन गर्दैै उहाँले महाकालीबाट दोधारा चाँदनीका लागि आवश्यक १० क्यूसेक पानी लिने..
राष्ट्रिय यातायात नीति नै संशोधन गरेर पानी जहाज चलाउने तयारी
काठमाडौं । रेल यातायातको विस्तार र जल यातायातको शुरुआतका लागि सरकारले १७ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तगर्तत बन्ने जलविद्युत आयोजनाको पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका छन् । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत बनाइने जलविद्युत आयोजनाको पहिलो..
१६ कर्मचारी रहने गरी पानीजहाज कार्यालय खुल्यो, जहाज कहिलेबाट चल्छ ?
काठमाडौं । सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । एकान्तकुना स्थित चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयलाई पानीजहाज..
भारतले पानीजहाज चलाउन नारायणी नदीको त्रिवेणी घाटसम्म जलमार्ग बनाइदिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाज चलाउने सपना साकार पार्न भारतले नारायणी नदीको त्रिवेणीघाटसम्म जलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र नारायणी नदीको त्रिवेणीघाटसम्म भारत सरकारले जलमार्ग तयार पारिदिँदा..
दमौली। एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको छ। आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत सम्झौता भएबमोजिम चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले विद्युत् गृह निर्माणको प्रक्रिया शुरु..
मेलम्चीको ठेकेदार सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द, रु २ अर्ब ६५ करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालीको कम्पनी सिएमसीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । पछिल्लो समय एकतर्फीरुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै आयोजनाबाट फिर्ता भएको सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता..
माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको ४० प्रतिशत काम, २०१९ को अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने
काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेर करीब पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोेटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म ४० प्रतिशत काम भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत तातोपानीमा निजी क्षेत्रबाट..
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६को पहिलो पाँच महिनामा १० प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । २५.७८ प्रतिशतबाट १५.४५ प्रतिशतमा चुहावट झार्न सफल भएको प्राधिकरणको दावी..
पश्चिम सेतीमा जलविद्युतमा कतारी कम्पनी लगानी गर्न इच्छुक, लगानी बोर्ड र नेब्रास पावरबीच बार्ता
काठमाडौँ। लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कतार सरकारको एक कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको छ । कतारका लगानीकर्ताले सो आयोजनामा चासो देखाएपछि लगानी बोर्डका अधिकारी..
काठमाडौं । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २९ गते बसेको बैठकले रेल खरीद गर्ने निर्णय गरेकामा भौतिक पूर्वाधार तथा..
सर्वोत्तम सिमेन्टले मासिक २० करोड राजश्व तिर्ने, १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी
नवलपरासी। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले मासिकरूपमा करीब २० करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि मासिक करीब आठ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्दै आएको उद्योगले क्षमता विस्तारसँगै अब..
विद्युत् प्राधिकरणका ४५ आयोजना अलपत्र, थप भएन म्याद
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका ४५ आयोजनाको म्याद थप नभएको जनाएको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था..
काठमाडौंमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकसम्म रेल कुँद्ने
काठमाडौं । काठमाडौंका सहरमा रेल कुँदाउने योजना औपचारिक रूपमा अगाडि सारिएको छ । सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायण गोपाल चोक रुटमा मेट्रो रेलको अध्ययन गर्न रेल विभागले एक महिनाको समय दिएर इन्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव..
काठमाडौं । सरकारले कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संरचनासमेत स्वीकृत गरिसकेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । १६ जना..
पाँचथर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक हरेक दिन एक कदम अघि बढिरहेको बताएका छन् । पूर्वी नेपालका चार जिल्ला जोड्ने भेँडेटार–रवि–राँके सडक शिलान्यास तथा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण..
प्रचण्डकी छोरी मेयर रेणूको अगुवाईमा भरतपुर महानगरमा अर्बौका आयोजना धमाधम बन्दै
चितवन। देशको मध्यभागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका भित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवासुविधा प्रदान गर्ने गरी ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको छ । महानगरप्रमुखमा निर्वाचित भएसँगै रेणु दाहाल भरतपुरलाई देशकै नमूना महानगर..
नेपालको विद्युत् खरीद गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत
काठमाडौं । वर्षाको समयमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् उपयोग गर्ने गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति ९पावर एक्सचेञ्ज कमिटी..
एचआईडिसीएलले शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयरपछि शतप्रतिशत हकप्रद
काठमाडौं । हाइड्रोईलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पहिलो पटक आफ्ना शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघिका दुई वर्ष कम्पनीले ५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेको..
५० मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना एकैसाथ निर्माण हुने
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मध्य क्षेत्रमा पर्ने ब्रह्मायणी नदीमा एउटै कम्पनीले दुई वटा जलविद्युत् आयोजना एकैसाथ निर्माण गर्ने भएको छ। सात अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ३५.४७ मेगावाट क्षमताको ब्रह्मायणी र तीन अर्ब..
चक्रपथमा चल्ने मोनोरेल ३ वर्षमा नै बन्ने ! मोनोरेलको डिपिआर चिनियाँ कम्पनीले बनाउने
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथ मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ। चाइनाको चाइना रेलवे २५ औं व्यूरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड..
माइबेनी जलविद्युतको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ दुई अर्ब ऋण दिन बैंक सहमत
काठमाडौँ। माइबेनी जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल एसबिआई बैंक र सिद्धार्थ बैंकले रु एक अर्ब ८६ करोड ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाको प्रवर्द्धक सामलिङ पावर कम्पनी र बैंकका प्रतिनिधिबीच आज यहाँ..
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले बुझायो अध्ययन प्रतिवेदन, कहिले आउँला रेल ?
काठमाडौं । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई आज बुझाएको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा..
भारतीय कम्पनीले बिक्री गरेको माथिल्लो मर्स्याङ्दीको विषयमा छानबिन हुने
काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को शेयर विक्री सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारसँगको छलफलपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय कम्पनी..
सधै विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सन अन्तत: कालोसूचीमा, टेण्डर प्रक्रियामा रोक
काठमाडौं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै काम नसकेको भन्दै कोस्टाल पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को..
दुई दिन विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने
नुवाकोट । निर्माणाधीन त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी ‘डबल’ प्रसारण लाइनमा तार विस्तारका लागि नुवाकोटमा दुईदिन विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नुवाकोट वितरण केन्द्रले सूचना जारी गर्दै यही..
Results 1098: You are at page3of 37